Kuyini ukuhamba ngebhayisikili kwe-metabolic? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ukuhamba ngebhayisikili ye-Metabolic yokwehlisa isisindo - izixazululo zepragmatic
Ukuhamba ngebhayisikili ye-Metabolic yokwehlisa isisindo - izixazululo zepragmatic
Kuyini ukuhamba ngebhayisikili kwe-metabolic?
Carbukuhamba ngebhayisikilikuyindlela yokukhohlisa ukudliwa kwe-caloric ngokuvimba imicu yomzimba (carbohydrate) ngezinye izinsuku bese uphinde uyiphinde uyenze kwabanye. Enye yezinkinga ezinkulu nezinye izinhlobo zokudla okunzulu ukuthi iningi labantu alikwazi ukuqhubekisela phambili izinhlelo zalo isikhathi eside.
Yize igama elithi 'lipid' lihlanganisa izinhlobo eziningana zama-molecule, i-lipid metabolism ivame ukubhekisa ekuwohlokeni nasekuhlanganisweni kwamafutha. Amafutha yi-triglycerides, angama-ester we-glycerin nama-acids amathathu. Amafutha angahlanganiswa kusuka ekudleni, ezitolo ezisezicubu ze-adipose, noma kusuka kuma-carbohydrate amaningi okudla esibindini.
Amafutha wokudla agaywa ikakhulukazi emathunjini amancane ngesenzo sikasawoti we-bile ne-pancreatic lipase. Usawoti we-bile emulsify amafutha. Zisebenza njengomuthi wokuhlanza, zihlephula ama-globules amakhulu amafutha zibe ama-micelles amancane.
Lokhu kwenza ukuthi zitholakale kalula kwi-lipase. I-pancreatic lipase bese iguqula i-triglycerides ibe yi-monoglycerides, ama-fatty acids mahhala kanye ne-glycerol. Le mikhiqizo ifudukela kumaseli we-epithelium yamathumbu - ama-enterocyte, lapho ehlanganisa khona kabusha ukwakha i-triglycerides.
Ama-Triglycerides, kanye ne-cholesterol, ahlanganiswe ngezinhlayiya ezinkulu ze-lipoprotein ezibizwa ngama-chylomicrons. Ama-lipoprotein anika amandla ukuthuthwa kwamafutha angenawo amanzi ezindaweni ezinamanzi. Ama-hylomicrons C ashiya ama-enterocyte, angena kuma-capillaries e-lymphatic, futhi ekugcineni angena egazini, akhiphe amafutha abe yizicubu.
Izindonga zama-capillaries egazi zine-enzyme engaphezulu ebizwa nge-lipoprotein lipase. Le enzyme i-hydrolyzes triglycerides ibe ngama-fatty acids kanye ne-glycerine, ebavumela ukuthi badlule odongeni lwe-capillary babe izicubu, lapho bahlanganiswa khona namandla noma baphinde banikwa amandla okugcina. Amafutha ahlanganiswe ngokungapheli esibindini ahlanganiswe nohlobo oluthile lwe-lipoprotein, i-VLDL, ukuze ithunyelwe ezicutshini, lapho kukhishwa khona ama-triglycerides ngendlela efanayo namafutha agcina izicubu ze-adipose ngenxa yesenzo se-lipase ezwela i-hormone, ephendula kumahomoni afana ne-epinephrine, ahlanganiswe ukukhiqizwa kwamandla.
Izindlela ze-metabolic ze-fat metabolism zixhunyaniswe kakhulu ne-carbohydrate metabolism. I-Glycerin iguqulwa ibe ngumkhiqizo ophakathi we-glycolysis, kuyilapho ama-fatty acids enza i-beta-oxidation ukukhiqiza i-acetyl-CoA. Umjikelezo ngamunye we-beta oxidation ususa ama-carbons ama-2 ochungechungeni lwe-acid fatty, kukhishwe i-acetyl-CoA engaphinde ixhunywe kumjikelezo we-citric acid.
amabhayisikili aseMelika enza izintaba
I-beta oxidation iphinde ikhiqize ama-molecule amaningi anamandla aphakanyiswa ngqo ohlelweni lokuthutha lwe-electron. Amafutha ahlinzeka ngamandla amaningi ngeyunithi ngayinye njengama-carbohydrate. Lapho i-acetyl-CoA ikhiqizwa ngokweqile, iyaphambukiswa ukuze yakhe imizimba ye-ketone.
Ngesikhathi sokushoda kwe-glucose, imizimba ye-ketone iwumthombo obalulekile wamandla, ikakhulukazi ebuchosheni. Kodwa-ke, imizimba ye-ketone ine-asidi, futhi uma ikhiqizwa ngokweqile, ingadlula umthamo we-plasma yegazi, oholele ku-metabolic acidosis, engaholela ekuqulekeni nasekufeni. I-Ketoacidosis iyinkinga exakile yesifo sikashukela lapho amaseli kufanele ahlanganise khona amafutha kaphethiloli ngoba awakwazi ukusebenzisa i-glucose.
Ukudla okune-carbohydrate ephansi kakhulu nokuqukethwe okunamafutha amaningi nakho kungaholela ku-ketoacidosis. Ehlangothini le-flip, ukudla okunama-carbohydrate amaningi kudala i-acetyl-CoA eyeqile engaguqulwa ibe ngama-acid okunamafutha. Ukuhlanganiswa kwama-fatty acids avela ku-acetyl-CoA kukhuthazwa yi-citrate, umaka womcebo wamandla, futhi kuvinjelwe ngama-acid amaningi.
Ama-fatty acids angaguqulwa abe yi-triglycerides yokugcina noma ukuhlanganiswa kwamanye ama-lipids ngokuwahlanganisa ne-glycerin, etholakala kumkhiqizo ophakathi we-glycolysis.
Ingabe ukudideka kwemetabolism kusebenza ekunciphiseni isisindo?
Yize i-ukudideka kokudla komzimbaingahle isebenze esikhathini esifushane, alukho ucwaningo olwanele lokuxhasa izinzuzo zalo zesikhathi eside. Ungakwaziukuncipha emsimbeniuseukudla, kepha kungaba nzima ukulandela isikhathi eside ngoba inama-calories aphansi kakhulu.
I-JEFF: Ukhathele ukuzama ukunciphisa isisindo kuphela ukwehluleka kaninginingi? Uhlulekile kabi ekudleni kwe-keto ngemuva kokuthi abalandeli be-Instagram abangu-14,000 bethe balahlekelwe ngamakhilogremu angama-50 emasontweni amathathu? Ukhathele ukubeka ibhotela ekhofi lakho bese uzama ukuziqinisekisa ukuthi kunambitheka kahle? Bese kuba yisikhathi soshintsho. Ochwepheshe abahamba phambili bokudla nezokudla muva nje bathole indlela yokuziphendukela kwemvelo ezosiza abantu abanjengawe bathole ama-pack abs ayisithupha abebelokhu bephupha ngawo. Kwethulwa iSF Diet, yiViralgenics.
Eyaziwa nangokuthi iStomach Influenza Diet. I-SF Diet ukuphela kohlelo lokwehlisa isisindo olusekelwa yiminyaka eyizigidi eziyisithupha yokuziphendukela kwemvelo. Isebenza ngokuhlasela izivikeli mzimba zomzimba wakho nakho konke nakho konke okusebenzisayo okukukhiphayo ekusakazeni okunamandla kokuqubuka kwamathumbu.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukudla kwe-SF kusebenza ngempumelelo okungu-40% kune-keto, i-60% isebenza kangcono kune-paleo, futhi kuphindwe izikhathi eziyi-100 kunokungabikho kokudla okukulethela ukudla komkhuhlane wesisu ezinsukwini ezimbalwa nje. Bheka uDan. Isuke ku- £ 220 yaya ku- £ 191 emahoreni amane nje.
Noma u-Andrew, ovela kwi-racquetball nabangani bakhe, uphume eshaweni. Noma uSheila, kusuka kwindlovukazi yobuhle kuya kwindlovukazi yobumba ngemizuzu engama-20 nje. Ngisho nebhokisi.
Le ngqalabutho ifakazela ukuthi noma izinkambo ezimbili zokulwa nesisu sensimbi ngeke ziphazamise imiphumela yakho ekudleni kwe-SF. Isayensi engemuva kokudla kwe-SF iqinisekisa ukuthi uzohlala unamaphutha aphelele futhi aphelele ekhalori usuku lonke. Ngokungafani nokunye ukudla okuzama ukukukhohlisa ngamandla omlingo wamahomoni azwakala kamnandi - afana ne-leptin ne-ghrelin - ukudla kwe-SF kwenza lokhu kungabi nanjongo lapho kunqwabelana nemiphumela yokuncisha ukudla yesikhali esiyimfihlo ngemuva kwempumelelo yalolo hlelo .
Ukudabuka kwamathumbu, imibimbi yomzimba, isicanucanu. Futhi ingxenye enhle kakhulu ngalolu hlelo ukuthi ungadla ngokoqobo noma yini oyifunayo ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi izowuthinta kanjani umzimba wakho. Kungakapheli nemizuzu emingaki, amandla omzimba wakho wokucubungula lokho okudlayo asebenza ngokuphelele Ukuhamba kwamathumbu onke kumile.
Futhi ngaphandle kokukhetha ukudla, konke okufaka esiswini sakho ngeke kuze kubonakale ngemibala egqamile. I-pizza? Ukufika. ISushi? Sayonara.
AmaNaso? I-Adios. Akudingeki ukhathazeke Ukubala ama-calories noma amalebula wokufunda lapho konke okudlayo kungenzeka kungaze kwenzeke esiswini sakho Ukudla kuza nendlela yaso yokulondoloza ngokulondolozeka enelungelo lobunikazi. Ngakho-ke ungahlala phansi uphumule ngokwazi ukuthi ukukhishwa kwakho kwekhalori sekuzokwenzeka.
Yikuphi ukuphela okuzayo, noma kunjalo, njalo ukuqagela. Ake sithi ibhizinisi elicokeme. Kepha lokhu kungalindelekile okwenza ukuthi kube nokuhlangenwe nakho kokudla kwe-SF futhi kugcine abasebenzisi bayo bematasa kakhulu futhi benentshisekelo kunanoma yiluphi olunye uhlelo lokudla oluyisidina, oluphindaphindiwe owake wadlula kulo esikhathini esedlule.
Futhi ungakhathazeki. Ngokungafani nokunye ukudla okushiya isistimu yakho kudoti ngemuva kokukwenza, uzoqhubeka ngokukhululekile ukujabulela ukudla kwethu okungavinjelwe, okumnandi. Ama-carbohydrate, amafutha, akukho lutho olungavunyelwe ekudleni kwe-SF, ngakho-ke ngiyazi ukuthi ucabangani.
Ngabe uzithola kanjani izandla zakho kulolu hlelo oluhle kakhulu lokwehlisa isisindo kolwakho? Ngiyajabula ukuthi ubuzile. Ukudla kwe-SF kulethwa ngqo ekhaya lakho ngenzalo yakho mahhala. Kulungile.
Ingane yakho encane ethimulayo kanye nokukhwehlela isebenza kahle kune-Amazon ekuqinisekiseni ukuthi uthola ithuba lakho lokuthola izinzuzo zalolu hlelo olusabekayo. Azikho izingane? Ayikho inkinga. Vele ukhethe imenyu endaweni yokudlela oyithandayo.
Xhawula wonke umuntu. Noma vele uphumele ngaphandle ubingelele usuku ngokwelula okuphumuzayo nesikhwehlela esijulile, esiqabulayo samathonsi amazolo asekuseni angenwe yigciwane, afakwe igciwane. Akunandaba ukuthi ukhetha ziphi izinhlobo zokudla, ungaqiniseka ukuthi ukudla komkhuhlane wesisu kuzokusebenzela khona manjalo, kuguqulele ingaphakathi lakho ku-spaghetti futhi kulwe namathumbu akho ngokushesha ukwedlula i-goose shit eyisaga.
Kepha akupheleli lapho! Thatha isinyathelo manje futhi uzothola ibhonasi eyengeziwe. nokugingqika phansi ngezinkinga ezinzima zesisu. Konke ukunyakaza kuklanyelwe ukudala ukusikwa okukhulu kwesisu okusonteka esiswini okuzokusiza ukuthi ushise amanoni angafuneki futhi uqophe lawo mapakethe amnandi, amnandi ayisithupha kanye.
Yizwa ukuthi laba basebenzisi bangempela be-SF bathini i-FEMALE: Ngilahlekelwe amakhilogremu ayi-19 ngezinsuku ezimbili ngiphalaza ama-projectile. OWESILISA: Angikaze ngiphume endlini yami yokugezela kusukela ngoLwesibili. Kepha ngiluqedile lonke uchungechunge lweHarry Potter.
Ikhava yekhava. OWESIFAZANE: Akusisizanga nje kuphela ukuthi sinciphise isisindo, kodwa futhi kusisondeze ndawonye. Sthandwa, ungabamba izinwele zami emuva? OWESILISA: Impela sithandwa.
OWESILISA: Ngenxa yokudla komkhuhlane wesisu, benginazo zonke izingubo ezintsha. Hhayi ngenxa yesisindo, engisilahlile, kungenxa yokuthi ngiyazicwilisa. OWESILISA: Ngilahle amakhilogremu angama-40 emahoreni angama-72 edlule.
Ngicela, umuntu othile angiyise esibhedlela? JEFF: Manje usalindeni ukuze uqale? Kulungile Inani. Kwa-Viralgenics, sikholelwa ekwenzeni izinhlelo zethu zifinyeleleke kuwo wonke umuntu. Ngokuthi 'okungabizi' sisho mahhala.
Njengaku-100%, ngaphandle kwemibandela, mahhala. Ngakho-ke mahhala, empeleni, lolu hlelo luvunyiwe ngisho nguBernie Sanders. Ngakho-ke, beka lezo zizathu eceleni bese uthatha ifoni.
Shayela ku-1-800-OUTBREAK. Opharetha bethu bakulungele ukuphendula ucingo lwakho. Isikhathi sokwenza kube lula ukwehlisa isisindo futhi.
I-ANSÄGER: I-Viralgenics. Abaholi bezizukulwane- izinhlelo zokuncipha kwesisindo selokhu kwavela inhlupho ye-bubonic. Imiphumela yakho ingahluka.
Ukutholakala kwama-antibiotic, ukubekezelelana kobuhlungu besisu, nokunakekelwa kwezempilo okuthembekile yizo zonke izinto ezingathinta imiphumela yomugqa womzimba wakho uma iqhathaniswa neminye. Imiphumela engemihle ingabandakanya ubuhlungu besifuba, ukushesha, ukuhamba kancane noma ukushaya kwenhliziyo, isiyezi esinzima, ukuzwa ukudlula, ukudlula, ukushintsha kwemizwelo, ukudideka, ukungabi nokuqunjelwa, ukusangana, ukundindizela, ukwehla kokushayela ucansi, nomkhuhlane. Njengenjwayelo, kunconywa ukuthi uhlolwe futhi uvunyelwe ngaphambi kokuba uqale lolu hlelo noma yiluphi olunye uhlelo lokudla, futhi ungazuza ngokuba nomuntu ohlakaniphile futhi onesibopho sokukutshela kanjalo.
I-JEFF: Ekugcineni, ngineqiniso elingakanani lokuthi lolu hlelo luzokusebenzela? Bantu, angisiye kuphela umdali wohlelo, nami ngiyikhasimende elisha.
Ngabe uhamba kanjani umjikelezo we-carb wokwehlisa isisindo?
Ukuhamba ngebhayisikilikuhilela ukubuyela emuva naphambili phakathi kwe- high-carbizinsuku naphansi-carbizinsuku. Kungase kungabi khonacarbizinsuku. Imvamisa uzoba ne- high-carbusuku lapho uhlela ukuzivocavoca kanzima. Ngalezo zinsuku, umzimba wakho udinga uphethiloli owengeziwe, ngakho-ke ungadla ama-2 kuye ku-2.5 amagremu kaama-carbsngephawundi ngalinye lomzimba wakhoisisindo.amashumi amabili. 2020.
Ukudla Kwe-Carbohydrate Ukudla Okuphansi Kwe-Carb Ukudla Okusheshayo Kokulahlekelwa Isisindo
imitholampilo yemvubelo yomsoco
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kwe-carb kuhle ekunciphiseni isisindo?
Kungakusizaukuncipha emsimbeni? Ngokwe-anecdotally,i-carb ngebhayisikiliangakwazi ukusiza abantuukuncipha emsimbeni. Kodwa-ke, okwamanje alukho ucwaningo lwesayensi olusikisela lokhui-carb ngebhayisikilikusebenza ngempumelelo engaphansi kwe-ukuncipha komzimbakunezinye izidlo.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukhulisa imetabolism?
Ukuhamba ngebhayisikilingokujwayelekile, ikakhulukazi ngamandla aphezulu, kusiza amazinga aphansi omzimba womzimba, okhuthaza ukuphathwa kwesisindo okunempilo. Futhi, uzobaukwandaeyakhoumzimbafuthi wakhe imisipha, ekuvumela ukuthi ushise ama-calories amaningi, noma ngabe uphumule.17. 2020.
Endomorphs yehlisa kanjani isisindo?
Ukuzivocavoca umzimba kuyingxenye ebalulekile yanoma yikuphiukuncipha komzimbaplan, ikakhulukazi kubantu abane-isiphethouhlobo lomzimba. Ukuvivinya umzimba kusiza ukwandisa umzimba nokunciphisa amafutha. Ukuzivocavoca kwenhliziyo njengokugijima kungashisa ama-calories futhi kusize ekudaleni ukushoda kwekhalori.27. 2019.
Ngingamtshela yini umkami ukuthi ehlise isisindo?
Umhlaba usheshe wamazisa ukuthi cha, akulungile ukubuza omunye wakho obalulekileukuncipha emsimbeniokwakho, ikakhulukazi uma kungenxa nje ye-ukuncipha.06.11.2017
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kweCarb kukhulisa imetabolism?
Ukuhamba ngebhayisikiliisebenzisa le miphumela. Ukudla amazinga afanele ama-carbohydrate ngesikhathi esifanele kusetha kabushaumzimbafuthi kubangela ukukhiqizwa kwamahomoni e-thyroid ne-leptin, okusiza ekulondolozeni isisindo. Ukudla kakhuluama-carbs, noma kunjalo, ithuthukisa ukuzuza kwesisindo ngokukhuthaza ukukhishwa ngokweqile kwe-insulin.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili keto noma carb kungcono?
Uma uzizwakangconoukungadliama-carbsngezikhathi ezithile futhi kubonakala kungaphazamisi isisindo sakho,keto ukuhamba ngebhayisikilikungahle kubekuhleikulungele. Ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi babonakala bezuza ngokuhlala ngokungaguquguqukilezinoma kushintshanalezingei-carb ephansi(cishe u-30-60 amagremu wenethaama-carbsuyachaza.
Uyibona ishesha kangakanani imiphumela ngebhayisikili ye-carb?
I-KB: 'Ukwehla kwesisindo kuzothatha cishe amasonto ama-3-4 kuye ngokudla nomzimba wakho. Kepha, ngokuzwa okuhle nokuba namandla amaningi,wenangizoqalaqaphelaumehluko ngemuva kwesonto lokuqala. '09/15/2020
Kuwufanele yini ukugibela ibhayisikili lokwehlisa isisindo?
'Uma unezinhlungu ezisezingeni eliphansi kodwa usafuna ukunciphisa isisindo, ukuhamba ngebhayisikili kuzoba ukubheja kwakho okuhle kakhulu futhi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ze-cardio, kunengozi encane yokulimala.' Kulungile, kufanele ngibuze ingabe ukuhamba ngebhayisikili kuyazuzisa uma ngifuna ukulahla amafutha esiswini?
Ungalwenza kanjani uhlelo lokuhamba ngebhayisikili lokwehlisa isisindo?
Uhlelo Lwebhayisikili Lweviki Lonke Lwe-Weight Loss 1 Bike ne-Cycling Gear. Ngaphambi kokuba uqale kumishini yakho yokuhamba ngebhayisikili, 2 Isikhathi. Cabanga ukuthi yisiphi isikhathi sosuku esingakulungela kangcono ukujikeleza, 3 umfutho wamabhayisikili. Uma usaqala, ungahle uthande ukwenza lula,
Ingabe kuhle ukushisa ama-calories ngenkathi uhamba ngebhayisikili?
Akuzona zonke izindaba ezimbi, noma kunjalo. Ukuhamba ngebhayisikili kushisa amakhalori, futhi lokho kushoda kwekhalori kungasiza ekuholeni kwesisindo uma ungeza umsebenzi wakho womzimba ngokudla okunomsoco. Ngokuvumelana, uzolahlekelwa isisindo kancane kancane kuwo wonke umzimba, hhayi nje emzimbeni owodwa ngesikhathi (kepha uyakwazi lokhu).